Isimo ibhanoyi yemoto idinga ukunakekelwa okukhethekile ngoba kuthinta izinga tenhlangano ukuphepha umshayeli kubagibeli. Ngakho kudingeka ukuba lokuxazulula inkinga ngesikhathi esifanele futhi esikhundleni izingxenye ezigugile. IStabilizer - ingenye izingxenye eziyinhloko kohlelo. Umsebenzi wakhe kuthonywa wokubamba Imigudu. Le piece has usayizi encane, kodwa, naphezu kwalokhu, kwenza ukulawula imoto ngokunethezeka. Kufanele kuphawulwe ukuthi izinga engaboshiwe ukubekwa uphawu izakhi ukunciphisa umthwalo igiya ukugijima.
Polyurethane emikhonweni lomkhakha wezindaba asetshenziswa kabanzi kunazo, nezinhlobo ezahlukene ezitolo futhi liqukethe embodiments iraba eyindilinga. Ngaphezu kokukhiqiza indaba, banayo nezakhi ezihlukene. Noma yisiphi sazo, kungakhathaliseki umenzi kanye nekhwalithi yekusebenta, angaphansi ukugqoka, njengoba akhawunti bona ngoba wethulwa umthwalo omkhulu phakathi ukusebenza imoto. Futhi kakhulu kuthinte isimo imigwaqo. Isebenza kuhle nxa iphutha timphawu saziso idinga ukushintshwa.
Ezilimele polyurethane bushing isimame kunomthelela ekushintsheni izinga lonke uhlelo kanye ziwohloke masinyane izingxenye ngenxa yalokho, ukuphepha ukusetshenziswa imoto snizhet. Ngakho ungayekethisi elula ingxenye ezinjalo, ngakho abangele izindleko ezinkulu tinning futhi ukulungisa.
Indlela ukunquma isidingo esikhundleni
Ukuze sibone inkinga kwezinye izimo akudingekile iphendukele uphethwe, ngoba, ngaphezu koshintsho lokulawula, ngokuvamile kuphakamisa imisindo ethize ivela ukumiswa. Lapho le umsindo iba evelele ngesivinini. Lapho ushayela emgwaqweni nge imigodi futhi imigodi khona ukushaya kwenhliziyo olubonakalayo ingxenye ukumiswa. Ngaphezu umsindo, kungabonwa kanye Ukuwohloka maneuverability wemoto.
consumable Ukumiselela kumele kwenziwe ngaphambi umonakalo yabo ifinyelela izinga ezibucayi. yesondlo Timely, njengoba yaziwa, kwelula hhayi kuphela empilweni emotweni, kodwa futhi azigcina izakhi zalo eziyisisekelo, ukuthengwa obiza enkulu impela.
Naphezu kweqiniso lokuthi imisebenzi ukulungisa kuqondile, odinga ukukwazi ezinye izici futhi anake ngokukhethekile ukukhethwa izingxenye ezintsha. Ngokuvamile abashayeli njalo izakhi ukushintsha phezu bushing isimame injoloba noma polyurethane. Polyurethane kunezinzuzo eziningi ukuthi abakwazi ukuqhosha ezinye izinto. Namuhla ukhetho enokwethenjelwa kakhulu futhi yesimanje ezingela izimvu zamanzi. It kwandisa isikhathi wokusebenza kokubili izici nazo zonke uhlelo ukumiswa umshini. Phakathi kwezinye izinzuzo, kuyafaneleka okulandelayo:
ukuchayeka kancane ukuba nolaka ukushayela isitayela;
olondolozela ukumiswa geometry okuyinto ozimele izimo kuma kanye nokusebenza;
anda ukushayela induduzo sibonga ukunyakaza abushelelezi mshini;
kuze kuphele isikhathi ukusetshenziswa ikwazile ukugcina amawadi ukuphathwa egcwele;
izimo ezihlukahlukene lokushisa musa kuthinte kuyaqina of indaba;
ukumelana yizici zemvelo ezimbi.
On Polyurethane bushings isimame impendulo, ngokuvamile omuhle, okuyinto nesinye isizathu sokuthokoza ukuthenga kwabo.
Ngemva sokunquma unsuitability ehlathini ayakha ngemva sitholakele emotweni, kudingeka sinakekele esikhundleni ngokushesha. izitolo amaningi anika isevisi afanele, kodwa zibiza ngempela eqolo. Kulokhu, zonke umnikazi imoto esimweni ngokuzimela enze wonke umsebenzi, ngisho ngaphandle kokuba ulwazi olukhethekile kanye nesipiliyoni.
Keys 10, 13 no-24 adingekayo ukuze ususe ukuvikeleka imishudo plastic ukuthi ubambe isimame, kanye nesimo sezulu ukukhiya subframe. Ngaphandle Jack nensimbi izibopho Awukwazi ukwenza lapho ukubanjwa isimame. Uyothola badinga polyurethane isimame bushing, inhloko 27 kanye isigwedlo, indima okuyinto steel pipe angasebenza.
Inqubo yomsebenzi ihlukaniswe izinyathelo ezimbalwa ezivamile:
ukususwa amalungu uvala;
ukususwa izingxenye ezilimele;
ukufakwa lwezimpawu entsha uhlanzekile owandulelayo esihlalweni.
Lokhu ngekulandzelana kwetintfo letenteka ngaphansi amandla ngisho nakulabo angakaze ukulungisa imoto. Ukushintshanisa udinga ukuqala ukulungiselela wonke amathuluzi nezimpahla ezidingekayo.
Polyurethane bushings isimame "Fulcrum" kukhona ukhetho engcono esikhundleni isici esidala. Ziyakwazi ukumelana okushisa, ezihlukahlukene izimo zemvelo ezingokoqobo zamanje emigwaqweni.
Abaningi izinto womshini lwezimpawu ziphelelwa nokunwebeka emsebenzini sezulu esibi. IStabilizer bushing polyurethane efanelekayo imishini yokusebenza endaweni zasemadolobheni, izimoto esetshenziswa ezweni kanye adventure uhambo. Abaningi bathi izici eziningana ezinjengolwazi kudingeka ukushintshwa kamuva kakhulu, uma ziqhathaniswa ejwayelekile.
abakhiqizi yanamuhla ukunikela anhlobonhlobo izingxenye ezisele of izinga ezahlukene futhi isigaba intengo. Ukuhlukahlukana ekhona kwezinye izimo kungase kukhungathekise umshayeli. Okuhlangenwe nakho abanye isiqondiso eyengeziwe, ikuvumela ukuba wenze izinqumo ezinhle. Futhi Umsebenzisi bangakhetha phakathi eziningana izingxenye ezifanayo ezivela abakhiqizi ezahlukene.
Ukubona intuthuko yomsebenzi
Naphezu kweqiniso lokuthi indawo polyurethane bushing isimame "Lanos" esiteshini inkonzo izobiza ngempela eqolo, inqubo yenziwa lula kakhulu uma siyithole kunoma imuphi omunye ukulungiswa kule ngxenye umshini.
Kuyaphawuleka isidingo ukuthobela imithetho yokuphepha, ngokukhethekile, izimoto kumele bawagxilise Jack.
Okokuqala udinga ukususa amasondo ukunikeza ukufinyelela okulula ukuzivikela, okuyinto kususwe ngokusebenzisa ukhiye 10.
Ukudilizwa kungenziwa lula nge Lubrication tonkhe tincenye izisebenzi ezikhethekile. Ngaphezu kwalokho unscrewed usebenzisa ofanele obandayo yokubeka okhiye mfutho futhi subframe umshudo.
Phakathi subframe futhi umzimba okuyingxenye igibele isigwedlo. Manje uphawu ubudala isuswe, indawo polyurethane emikhonweni phambi ukumiswa isimame. Kumele ufake kusayithi ukufakwa futhi silungise ezinjengenyanga metal. Ukwandisa izinga nenkanuko edlulele, okokuqala udinga ukususa gasket elise phakathi umzimba imoto kanye subframe. Kugcine ngu imishudo nasezinsikeni ingxenye yomzimba. Rack aboshelwe endaweni yayo emva wonke umsebenzi.
izakhi yasibamba kungenzeka lula ngokusebenzisa isakhiwo graphite indiza umsebenzi.
Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe ukuphepha. Kufanele zisetshenziswe futhi imininingwane amathuluzi eliphezulu kusuka abakhiqizi omethembayo, lokhu kuzovimbela ukushintsha kwezinkathi timphawu tesakhiwo futhi ubungozi bokulimala.
Uphawu izakhi lenkampani VTR, ngokuvumelana abanikazi imoto, kukhona inani kangcono imali, ephelele imininingwane igrisi enikeziwe kuqinisekisa ukufakwa lula.
IStabilizer bushing polyurethane Febi, kuzibuyekezo ikhasimende, ukulondolozwa izimoto zabo kusuka squeaks ecasulayo nemisindo, okuyinto ephawuleka ikakhulukazi uma ikhwalithi embi imigwaqo, futhi ezihambayo "isivinini uhlevane", ngisho enamazinga okushisa angaphezu zero.
Amazwana imininingwane Moog RE-SB-6849 ikakhulukazi omuhle, abanikazi imoto ungazange wakuphawula yiziphi izinguquko ekuphathweni, kodwa umsindo ingekho ngisho ekupheleni kweminyaka emibili noma emithathu bengakakwazi ukusebenzisa Imigudu.
Indlela esindayo sensimbi ibhethri. Isisindo eyodwa esigabeni